လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်လောက်ကတည်းက SD-WAN နည်းပညာအကြောင်းကို လူပြောများလာရုံသာမက အခုနောက်ပိုင်းမှာလည်း Enterprise တော်တော်များများက သူတို့ရဲ့ WAN(Wide Area Network) Environments တွေပေါ်မှာ SD-WAN ကို Apply လုပ်လာကြပါတယ်။ ဒီလို Apply လုပ်လိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ Business Value တွေရရှိလာတဲ့အတွက် SD-WAN နည်းပညာဟာ အရမ်းကို Trend ဖြစ်လာပါတယ်။ SD-WAN Vendor တွေဘက်ကလဲ Customer တွေရဲ့ WAN Edge တွေအပေါ်မှာလိုက်ပြီး Basic SD-WAN Functionality တွေနဲ့ မလုံလောက်ဘဲ ထပ်မံလိုအပ်တဲ့ Requirements တွေကို ဖြည့်စွက်ပေးနိုင်ဖို့ လုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။ ဒီတော့ 2019 အတွင်းမှာ SD-WAN နည်းပညာကို Enterprise တွေမှာ Requirements တွေနဲ့ အညီ ဘာတွေထပ်ပြီး Deploy လုပ်နိုင်မလဲဆိုတာ တစ်ချက်ကြည့်ကြရအောင်။
SD-WAN မှာ Enterprises တွေရဲ့ WAN Traffic တွေကို Distinguish လုပ်နိုင်မဲ့ Advanced Techniques တွေပါလာမယ်။
Basic SD-WAN ရဲ့ Functionality အရဆိုရင် WAN Link တွေပေါ်မှာ ဘယ် Application Traffic (Eg. Microsoft, Game, Etc) တွေ သွားနေလဲဆိုတာကို DPI(Deep Packet Inspection) တွေပေါ်မှာ ကြည့်ပြီး သိနိုင်တယ်။ Advanced Techniques တွေမှာတော့ ဘယ် Application Traffic တွေကို White-Listed ထားပြီး Internet ကနေ တိုက်ရိုက် အဝင်အထွက်ရှိမယ် ၊ ဘယ် Traffic တွေကျတော့ Next-Generation Firewall တွေ ၊ Cloud Security Services တွေနဲ့ ထပ်စစ်ဖို့လိုအပ်တယ် ဆိုပြီး Traffic Classification တွေပါလာပါမယ်။
High-Quality Voice နဲ့ Video Services တွေကို Enterprises တွေမှာ Provide လုပ်ဖို့အတွက် SD-WAN နဲ့ Unified Communication As A Service(UCAAS) တို့ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။
ဒါကတော့ Enterprises တွေက Broadband ကို ပြောင်းသုံးလိုက်တဲ့ အတွက်ကြောင့် သူတို့ရဲ့ UCAAS Solutions တွေဖြစ်တဲ့ Voice တွေ ၊ Video တွေရဲ့ Quality တွေ ၊ Availablity တွေ ၊ Reliability တွေနဲ့ Meet ဖြစ်ဖို့ကို မျှော်လင့်ထားကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် SD-WAN Solutions နဲ့ ပူးပေါင်းပြီး ဒါတွေကို Drive လုပ်နိုင်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Unified SD-WAN Platform ကိုသုံးပြီး Multi-Cloud ကို Deployments လုပ်နိုင်လာပါမယ်။
ဒါကတော့ ကိုယ့် Enterprise ရဲ့ Data တွေက Public Cloud (Eg. AWS, AZURE) မှာလည်း ရှိမယ် ၊ ကိုယ့်ရဲ့ Private Datacenter မှာလည်း ရှိမယ်။ ဒီလို Locations တစ်ခုကနေ တစ်ခုကို သွားမဲ့ Data တွေရဲ့ Traffic တွေကို Unified SD-WAN Platform ကိုသုံးပြီး တစ်သားတည်းကျအောင် Manage လုပ်နိုင်ရုံသာမ Data Traffic တွေက Plaintext အနေနဲ့ မသွားပဲ Encryption ရှိတဲ့ အတွက်ကြောင့် Security ပိုင်းဆိုင်ရာအနေနဲ့လည်း စိတ်ချရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုနောက်ပိုင်း ထွက်ပေါ်လာမဲ့ 5G ကိုလဲ SD-WAN Transportation အနေနဲ့ သုံးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
WAN Links အချင်းချင်းတွေကြား Connectivity ရှိဖို့အတွက် Transport Networks တွေဖြစ်တဲ့ 4G ၊ Direct Internet Access (DIA)၊ MPLS တွေသာမက နောက်အသစ်ထွက်ပေါ်လာမဲ့ 5G ဟာလည်း SD-WAN မှာ Transport Network တစ်ခုအနေနဲ့ အကျုံးဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
စာဖတ်သူတို့ အနေနဲ့အခုဆိုရင် SD-WAN ရဲ့ 2019 အတွက် ဖြစ်လာမဲ့ Functionalities တွေအကြောင်းကို ထိုက်သင့်သလောက် သိပြီလို့ ထင်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ Enterprise မှာ ယခုလက်ရှိ SD-WAN သာသုံးထားခဲ့မယ်ဆိုရင် Future အတွက် အပေါ်ကအချက်တွေကို ကြည့်ပြီး WAN Edge Infrastructure ကို Enhance လုပ်နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။